Chinyorwa chemasaiti ekudhanilodha mahara ebook zviri pamutemo | MaReaders ese
Chinyorwa chemasaiti ekudhanilodha mahara ebook zviri pamutemo
1 Kutsvaga anoverenga zvekusungwa?
2 Asina-purofiti saiti kurodha maebook
2.1 Iwo makuru mapurojekiti
2.2 Zvirongwa zvemunhu
2.3 Mamwe mawebhusaiti ekudzivirira ma eBooks
3 Zvemabhizimusi mapurojekiti ane emahara ebook
4 Saiti kudhanilodha technical ebook
Kutsvaga anoverenga zvekusungwa?
Vanhu vazhinji vari kutibvunza kuti muverengi upi anogona kutengwa kuti kuvharirwa kunakidze. Kana iwe usiri kuda kuenda wakananga kune iyo poindi, tinokurudzira 2.
Anotengesa anotengesa zvakanyanya pamusika. Zviri nezve muverengi weAmazon
Kune vanoda zviyero uye mhando
Nekuunganidzwa uku isu tinoda kupa yakadzokororwa runyorwa rwe mawebhusaiti ekudzivirira ebook mahara uye zviri pamutemo. Pfungwa yedu ndeyekuvandudza runyorwa nguva nenguva nekuwedzera matsva matsva kana kubvisa iwo asisiri kushanda. Rangarira izvo ivo vanogara vari mapurojekiti anopa zvemukati zviri pamutemo.
Isu tinoedza kupatsanura masosi kuitira kuti vagadzikane sezvinobvira kuashandisa. Mumabhureki isu tinoratidzira mitauro yemabook iyo iwe yaunogona kuwana pane yega yega chikuva. (ES) ChiSpanish, (En) Chirungu uye (IS IN) MuSpanish neChirungu. Nhau kubva kwekupedzisira kugadzirisa dzinoonekwa ne girini kumashure.
Yedu runyorwa ine 63 zvinyorwa nemamiriyoni emabhuku anowanikwa mumitauro yese.
Asina-purofiti saiti kurodha maebook
Muchikamu chino ticharatidza nzvimbo dzisingabatsiri uko download books yemarudzi ese kubva ku Classics, kune zvinyorwa, kuburikidza nemanoveli kana mabhuku evana.
Iwo makuru mapurojekiti
Mapurojekiti akajairika uye ekare mabasa ari munharaunda yeruzhinji. Gutenberg anomira pamusoro pezvose, pakuve akanyanyisa uye nekuti anotipa ma ebook mu .epub uye .mobi.
Gutenberg Project (IS IN) Yakasarudzika pakati pechinyakare kana zvasvika kune mapurojekiti anopa emadzishe-emahara mabasa. Iyo hombe yekuchengetera yeruzhinji dura mabhuku munyika.
Archive.org (IS IN) Imwe yekuchengetedza yemamirioni emadhijitari eruzhinji mabhuku eruzhinji. Inopa pdf.
- Vhura Raibhurari (IS IN) Chirongwa cheInternet Archive icho chakanangana nekugadzira peji rewebhu rebhuku rega rega riripo. Kunyangwe iyo isingatenderi kurodha pasi kubva kumatebhu kana mapeji emabhuku, inobatana naGutenberg, Archive kana kwainowanikwa iko kana kuri munzvimbo yeruzhinji.
Wikisource in Spanish uye kana iwe uchida mabhuku mune mumwe mutauro wikisource. Iri raibhurari yepamhepo yezvinyorwa zvepakutanga munzvimbo yeruzhinji kana pasi pezenisi.GFDL chirongwa cheWikimedia chinotendera kurodha pasi mu pdf.
Wikibooks (ES) Imwe chirongwa cheWikimedia icho chakanangana nekugadzira mabhuku ekuverenga, emanyorero, ezvidzidzo kana mamwe magwaro edzidzo ane zvemukati zvemahara uye zvemahara kuwana kune chero munhu.
iBiblio (En) Huge raibhurari uye dhijitari Archive.
Dhipatimendi repepanhau reSpanish (ES) Yemahara uye yemahara portal yemadhijitari emabhuku eruzhinji library.
Miguel de Cervantes Virtual Raibhurari (ES) Icho chaicho chiunganidzwa chemhando yepamusoro mabasa muSpanish mitauro.
Municipal network yemaraibhurari eSeville (ES) Dhijitari kataroguru yemaseya raibhurari network yeSeville.
Europeana (IS IN) Iyo ndiyo poindi yekuwana kune zviuru zvezvigadzirwa zvemadhijitari muEurope.
University of Adelaide (En) Raibhurari yepamhepo yeYunivhesiti yeAdelaide muAustralia, inotibvumidza kuverenga online, kana kurodha pasi mabasa mumafomati akasiyana siyana.
Kobo Clara HD ongororo
Mapurojekiti madiki asiri epundutso.
Goose naOctopus (ES) Imwe yematanho asiri epundutso ane mhando yepamusoro muzvinyorwa zvayo. Ganso y Pulpo chirongwa chakazvimirira chisina purofiti chekutsikisa icho chinotsvaga kuburitsazve zvinyorwa zvinonetsa kuwana kana kukanganikwa uye izvo zvatove zvisina kodzero.
Ngano dzeAlgernon (ES) Yakanaka danho rinoburitsa isina kunyorwa fungidziro, sainzi ngano uye dzinotyisa nyaya muSpanish. Imwe chirongwa chega chega-chisina purofiti chinotiunzira nyaya kubva kune vanyori vanotungamira vasina kumboburitswa muSpanish. Mukundi weIgnotus 2013, kana iwe uchida sainzi ngano inofanirwa.
Cruciform Editions (ES) Imba diki yakazvimiririra isina-purofiti yekutsikisa imba, inokunda Ignotus muna2013, inotipa maebook emahara pamwe nevamwe vane zvinyorwa zvidiki izvo, kana vapedza, vanova veruzhinji.
Book Camping (ES) Ivo vanotsanangurwa sekubatana kwedhijitari raibhurari. Ivo vakatsaurirwa kubatanidza mabasa neakavhurika marezinesi. Iyo inobatanidza zvakawanda kune zviwanikwa pane zvematongerwo enyika, zvemagariro uye zvekutaurirana nyaya.
qomun (IS IN) Dhairekitori uye yemahara tsika yekuparadzira chikuva.
1 bhuku 1 € (ES) Iyo yega chirongwa pane rondedzero yese iyo isingape emahara mabhuku, asi chikonzero chakakosha. Mukutsinhana nechipo kuSave the Children unogona kurodha pasi mabhuku ese aunoda, kunyange vachikurudzira kuti ubhadhare € 1 pabhuku kubatsira vana.
Dhijitari mabhuku (ES / EN / FR) Muunganidzwa wemabasa akagadzirwa naIgnacio Fernández Galván.
Mamwe mawebhusaiti ekudzivirira ma eBooks
Muchikamu chino tinoona zviwanikwa zvinotipa ma ebook pane mamwe maratidziro.
Iyo Metropolitan Museum yeArt (En) Iyo Metropolitan Museum yeArt muNew York inotipa huwandu hwakawanda hwezvinyorwa muPDF fomati inotenderera pasirese yehunyanzvi.
Dhijitari Comic Museum (En) Muunganidzwa wemakomiki echinyakare kubva pazera regoridhe ane anopfuura zviuru gumi neshanu eruzhinji macomics ekurodha mahara.
Raibhurari yepaIndaneti Yekudzidzisa Tekinoroji (ES) Uku kuunganidzwa kwemabhuku edijita nemagazini muPDF akagadzirwa naPurofesa Diego F. Craig, kutenderera munda weEdigital Technology, uye ese ari magwaro munzvimbo yeruzhinji kana nemarezinesi anovabvumidza kugoverwa.
Boe - Mutemo (ES) Kuunganidzwa kwemitemo mikuru iri musimba muchirongwa chepamutemo inogara ichigadziriswa uye mu pfd uye epub fomati Ivo vanounzwa nemapazi emutemo.
Zvemabhizimusi mapurojekiti ane emahara ebook
Icho chiri pamusoro mapurojekiti anotengeserana-anotengesa ayo anopa mamwe emahara mabhuku. Pano tinowana makambani makuru akadai seAmazon, Google kana imba yemabhuku, vaparidzi vadiki vanopa maebook emahara uye mamwe mawebhusaiti uye injini dzekutsvaga dzakavakirwa pazvirongwa zvakaita saGutenberg.
Amazon Kindle (IS IN) Iyo ebook hofori inotipa isu hombe nhamba yemahara ebook mumitauro yese.
- Veruzhinji Domain kuAmazon (IS IN) Tsvaga mabhuku eAmazon ane rezinesi muPublic Domain.
- Yemahara Bhuku Sifter (IS IN) Injini yekutsvaga yakavakirwa pamabhuku eAmazon kuti zvive nyore kwatiri kuvhima ma ebook emahara eMhando yedu, kune mabhuku muchiSpanish kunyangwe iwo akawanda kwazvo ari mabhuku echirungu.
- Mazana zeros (ES) Imwe injini yekutsvaga yakavakirwa paAmazon. Anotiratidza mabhuku echiSpanish.
- Freebooksy (En) Iyi purojekiti yakavakirwa pakupa emahara mabhuku kubva kuAmazon, Barnes neNobles uye Kobo uye anozvipa kwatiri mune blog fomati.
Imba yebhuku (IS IN) Imwe yemashopu makuru emabhuku muSpain, yayo yakawanda yekutengesa katarogu inosanganisira emahara kana zero-mutengo wemabasa.
Google Books (IS IN) Inoshanda seindekisi yemabhuku uko kwatinogona kuwana huwandu hukuru hwemabhuku anowanikwa kuti averenge pamhepo kunyangwe zvisiri zvekutora pasi.
Play Store (IS IN) Chitoro cheGoogle chepamhepo, patinogona kuwana akawanda emahara emabhuku ekuverenga kubva kune yedu Smartphone kana Tablet.
Ruzhinji rwevanhu (ES) Purojekiti yakafanana nedhairekitori uko ivo vane basa rekuparadzira nekunyora mabasa ayo ave eruzhinji nzvimbo.
library (ES) Initiative iyo inokutendera iwe kurodha mahara ebook uye kubhadhara mushure mekuverenga izvo zvaunofunga zvakanaka, nzira nyowani yekuita mari mabasa. Inoda kunyoreswa.
Virtual Bhuku (ES) Portal uko vanyori vekare vane mabasa munzvimbo yeruzhinji vanobatana nevanyori vatsva vanoisa mabasa avo ekugovera
Vaverengi veBQ (ES) Sarudzo yemhando yepamusoro iyo iyo BQ kambani inotakura mabhuku evanoverenga. Vanotisiira zip faira kuti titore.
Raibhurari (IS IN) Portal iyo inopa yakawanda nhamba ye ebook.
Mabhuku ekufambisa (ES) Elektroniki raibhurari iyo inotipa isu sarudzo yemabasa munzvimbo yeruzhinji.
Mabhuku mazhinji (En) Iyo projekiti inotora pane Gutenbeberg uye Genome chirongwa kune audiobooks.
eBooksgo (En) Gutenberg-yakavakirwa bhuku dhairekitori.
Planet Bhuku(ES) Inopa mabhuku eruzhinji.
Vhura Tsika Yemahara ebooks (En) Nyora nemabhuku anodarika mazana manomwe emidziyo dzakasiyana siyana, ereaders, iphones, iphdss, mafoni, nezvimwe.
Dyskolo edhisheni (ES) Edhisheni mune ese mabasa ayo yainoburitsa iri pasi peCreative Commons rezinesi
Bubok (ES) Iyo huru desktop yekutsikisa chikuva ine yakawanda nhamba yemahara emabhuku.
24 Zviratidzo (ES) Icho chikuva chekuverenga pamhepo, chiyero chakapetwa chekuverenga mabhuku pamhepo, asi zvinotisiira mavhoriyamu akasiyana kuti tiverenge mahara.
Kobo (En) Iyo hofori Kobo, ine mahara ebook mune yayo katalog senge Amazon.
Barnes & Noble (EN / ES) Yechitatu mukukakavara pamwe chete naKobo neAmazon, ine mavhoriyamu emahara ekurodha pasi.
Smashwords (EN / ES) Indie bhuku rekuparadzira, iine nhamba hombe yemahara ebook.
Ebook mall (En) Dhijitari ebook ereaders, iphones, mafoni, mapiritsi, ipads, pc uye mac
Sportula (ES) Genre muparidzi uyo anotifadza isu nemamwe mabasa ake mahara
Lektu (ES) iyo huru Spanish tsika papuratifomu, kwatinogona kuwana ebook, audiobooks uye podcasts kunyangwe zvabhadharwa, zvemahara, zvinotorwa kuburikidza nemubhadharo wemagariro kana nenzira yekubhadhara kana uchida.
Bhuku (ES) Anopfuura zviuru gumi zvemabhuku anowanikwa kurodha pasi. Kunyangwe iri yemahara, tinoda kunyoresa pawebhu kuti tivape.
Kurota mongers (ES) Uyu muparidzi anotarisa-rondedzero anotarisa bhizinesi rake kutengesa mabhuku emapepa asi anotisiira mabasa akati wandei pasi peCreative Commons rezinesi ( CC BY-NC , CC BY-NC-SA , CC BY-NC-ND )
Mabhuku mufoni mangu (En) Ebook rakagadziriswa kuitira kuti vakwanise kuverengwa pane chero foni kana chishandiso chine Java yakaiswa
Junkie ebook (En) Platform yevanyori vatsva uye vakazvimiririra
Bibliotastic (En) Mumwe muparidzi wevanyori vakazvimiririra
Saiti kudhanilodha technical ebook
Mawebhusaiti akanangana nekupa emahara uye epamutemo ehunyanzvi uye esainzi mabhuku.
Vhura Libra (IS IN) Iyo huru online raibhurari yehunyanzvi ebook. Pasina kupokana, chirongwa chinonakidza kwazvo chinogadzira uye chinotipa huwandu hukuru hwema ebook ehunyanzvi uye emahara. Yakagadzirira kurodha pasi.
Microsoft Technet (En) Microsofot inotisiyira imwe yemahara tekinoroji uye software ebook kurodha pasi mu pdf fomati kana kuverenga online.
NASA ebooks (En) NASA tekinoroji mabhuku ezvinyorwa zvemuchadenga. Inonakidza kwazvo.
CSIC mabhuku (ES) Huwandu hukuru hwezvinyorwa zvemahara kubva kuHigh Council yeKudzidza Sayenzi. Inobata matavi ese esainzi.
MuTekinoroji (En) Inonakidza kwazvo katarogu yetekinoroji uye misoro yesainzi inoshanda ne Open Open.
Mahara Tech Mabhuku (En) Mahara uye emadzishe-emahara mainjiniya uye epurogiramu mabhuku.
O'Really OpenBooks (En) Iyo O'Really yekutsikisa imba inotisiyira ayo Akavhurika Mabhuku. Havagone kurodha pasi asi iwe unogona kuverenga pamhepo, zvimwe zvinonakidza zviwanikwa.
Mahara Ekugadzira Mabhuku (En) Pamwe iyo yakanakisa rondedzero yandakasangana nayo, inoyevedza, ine hutsinye kuunganidzwa, yakachengetedzwa kusvika pari zvino kuburikidza neGithub. Neiyi linki mamwe ese ehunyanzvi mahukama anoda kumira kumira. Pamusoro peGithub tinoiwana iri reSRC mune yakasununguka webhu fomati
Pamhepo Zvirongwa Mabhuku (En) Muunganidzwa wemabasa ekuronga, komputa sainzi, software mainjiniya, kusimudzira webhu, kuvandudza app, dhatabhesi, netiweki, nezvimwe.
Uye izvi ndezvezvino 🙂
Pari zvino hatina kuwedzera vaparidzi vanopa emahara mabhuku asi vasingabvumire kuti asvinwe nyore kana kutsvagiswa, asi isu tiri kufunga nezve maitirwo acho kune iwo rondedzero nekuti zvirokwazvo vanhu vazhinji vanofarira.
Kana iwe uchiziva mamwe masayiti ane emahara uye epamutemo zvemukati izvo isu tisina kusanganisira, ndapota tizivise uye isu tichavawedzera kune iwo mazita e mapeji ekurodha emahara ebook pamhepo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: MaReaders ese » Software » eBooks » Chinyorwa chemasaiti ekudhanilodha mahara ebook zviri pamutemo
Boris Da Silva Perez akadaro
Ndatenda zvikuru, uye makorokoto pane blog, ndinokuteverai zuva nezuva! Basa rakanaka!
Pindura Boris Da Silva Pérez
Tinokutendai nekuverenga kwedu 🙂 Kwazisai
NIEVES PEREZ SAN JUAN akadaro
NDINOTENDA ZVAKANYANYA KUNE CHIPO CHAKO CHESE CULTURAL INFORMATION NDINOTENDA ZVAKAKOSHA.
Pindura kuna NIEVES PEREZ SAN JUAN
Ndakagamuchira tsamba yacho. Ndokumbira unditaurire kuti ndinoita sei nezvekutsvaga, kurodha pasi eboks? Ndatenda.
Mhoro Enilda, wagamuchira email iyo yanga iri chiziviso kune yakavanzika meseji muforamu yechimwe chirongwa chitsva chatichiri kufukidza asi icho chisina kugadzirira. https://www.todoereaders.com/foros/showthread.php?t=794
Zvakanaka sei, Nacho, kuti iwe unogovana idzi tsika nzvimbo.
Ndine bhuku rekurodha blog (kodzero dzese dzakaburitswa), dzakanyanya kuzvininipisa kupfuura idzo dzawakaburitsa, hongu. Pano ndinoigovana: Epub uye PDF yemahara, kana mumwe munhu achida kutishanyira 🙂
Ndatenda zvikuru nekuda kwekuumbwa kukuru, izvo, ndinofungidzira, zvichakutorera nguva yakareba kuti uungane nekuraira.
Mhoroi, ndinokutendai zvikuru nezano iri, ndichaongorora chirongwa chenyu uye kana chikasangana nemamiriro ezvinhu mune inotevera yekuvandudza rondedzero yandichaita mumazuva mashoma ndichaiwedzera.
Zvakanaka, Nacho, maita basa kwazvo! Ndinovimba inosangana nezvinodiwa.
Kubvumbi 23 izuva rakakosha kwazvo kutenderera pasirese nekurangarirwa kwe "International Book Day" uye "Author's Right", mune inotevera link ndinokusiira iwe kuunganidzwa makumi mana epamhepo kushambadzira ebook 40:
Mune ino link iwe unogona kuona apo mamwe mabhuku achange ari mahara paAmazon.
Pindura kuna alexarriete
Manheru akanaka, ndatenga bq cervantes e bhuku, asi ini ndinocherekedza kuti angangoita ese emabhuku ndeeye kindle ... handikwanise kudhawunirodha pa bq (regerera kusaziva kwangu, ndiri mutsva kune izvi)
Pindura kuna goitia
Shamwari yakanaka, kana izvozvo zvikaitika zvakanyanya, zvinowanzove kumisa mabhuku. Kana uchida, shanyira peji ino uye iwe unowana mafomati mazhinji mukuwedzera kune kuve nemazita anodarika zviuru makumi matatu. http://www.megaepub.com/
Mhoro nei usingaedze kurodha epub mahara kubva papeji rino [rakapepetwa] rine mabhuku mumafomati ese!
Mhoro Milagros. Isu tinongotaura nezvesaiti ine kurodha pasi kwepamutemo.
Makadii? Iwe unoziva chero chikuva apo iwe chaunogona kurodha epub, uye wovaita kuti varatidzwe seyakafanana shefu? Mune mamwe mazwi, rakazara rakafarirwa remabhuku ako wega mugore. Ndatenda!!
Mhoro Darío, izvozvi handizive chero, kunyangwe ndine chokwadi chekuti pachave nechimwe chinhu. Sarudzo yakanaka ndeyekuisa raibhurari yako neCaliber maneja pane dropbox, kuteedzera, kutyaira kana zvakafanana. Saka unogara uine mabhuku ako online.
Nacho, ndatenda nemhinduro. Asi izvo zvandinoda hazvisi zvekungovachengeta mugore chete, asi kugona kuona mabutiro nemazita eimwe neumwe, kuti ndikwanise kuvasarudza. Kana ini ndikapinda mugore kubva pahwendefa rangu, ini ndinongoona chete mazita emafaira, uye kwete mabutiro. Uye dhawunirodha kana zvichidikanwa. Kana iwe ukawana chimwe chinhu, ndiudze! Ndatenda!
Mhoroi, ndinoda bhuku "The English Cemetery" rakanyorwa naJM Mediola, mungandiudze kuti ndingaiwana sei. Ndatenda.
Mhoro. Ini ndinokukoka iwe kuti usangane naAblik ( http://ablik.com). Ebook inogona kutorwa pasi kana kuverenga zvakananga pachiratidziro nechero chinhu. Iwo ekare mabasa emabhuku asina copyright, kana mabasa epakutanga, izvo zviri pamutemo zvachose. Inogona zvakare kuburitswa. Shuwiro yakanakisa!
Geez, ini ndakura uye ndiri "kubata bug yezvinhu izvi", kubva pakuva mucherechedzo, ndiri zvishoma nezvishoma kuva (kana kunzwa kunge ...) ... "nyanzvi", uye zvese nekuda kwako uye zvinyorwa zvakawanda mu «todoreaders.com»! WAITA HAKO !
Pindura kuna laviniacor
Lucia Garcia akadaro
Kwakanaka kuumbiridza Nacho! Zvimwe kunze kweAmazon ine Inonzwika, ndeapi mamwe mawebhusaiti aunokurudzira ekuteerera kumabhuku ehurukuro?
Pindura kuna Lucía García
Masikati akanaka, inonakidza chinyorwa kune vanoda kuverenga.
Kune vese avo vanofarira kugamuchira $ 0,00 Mhando dzemabhuku pamabloggi, bhizimusi, bhizinesi repamhepo, kusimudzira pachako, mari yekuita kana mari yemunhu, ndinogona kukubatsira.
Pindura kuna Arnaldo
Ndatenga BQ Cervantes 3 muMadrid. Asi ini ndinogara kuArgentina uye ndinozviwana ndisisina kushamisika kuti handikwanise kutenga mabhuku kubva kuStore kana chero imwe nyika yangu nekuti iyo NUBICO system haigamuchire, semuenzaniso, maArgentina makadhi echikwereti, chimwe chinhu chisingaitike nedzimwe nyika. munyika yandinotenga.
Ndine imwe nzira yekutenga here kana kuti ndatambisa mari?
Ndakatenga BA Cervantes 3 parwendo rwangu rwekupedzisira kuMadrid
Sezvo chitoro cheNubico chisingagashiri makadhi echikwereti kubva kunyika yangu, handina kukwanisa kutenga chero mabhuku. Uye ndiri kutaura nezve kutenga, kwete kurodha mahara ebook.
Mumwe munhu anogona kundiudza muchitoro chipi kana mutengesi wemabooks andinogona kutenga kubva kuArgentina?
Mhoro Goodnight. Unogona kukurudzira munhu anoverenga gumi. Ndiri kufarira fomati iyi kuverenga mabhuku ehunyanzvi mu pdf fomati.Ndine vamwe vaviri vanoverenga (Papyre neBq Cervantes) asi mune izvi hapana nzira yekuverenga ma pdf. Muverengi gumi nevaviri akagadzirira riinhi uye nyore kuwana? Shuwiro yakanakisa
Ndinokurudzira kuti utarise chirongwa cheEbrolis, webhusaiti yacho iri http://www.ebrolis.com
Pindura kune Wako
Mhoroi, tinoiongorora uye kana ikasangana nemamiriro ezvinhu isu tichaiwedzera mune inotevera yekuvandudza kweiyo posvo.
Ndatenda zvikuru 🙂
Mhoro ini ndoda kuziva nezve «Unbox» kuti utore pakarepo mabhuku edhijitari ane chekuita nezvehutano zvakanyanya oncology uye mazino, mabhuku asiri kuwanikwa munyika mangu akadhindwa. Ndiri kuda kurudziro kubva papeji iro inzvimbo zhinji inonditungamira kune ino.
Luis Diego akadaro
Ini ndinokurudzira ichi 2020 kuti ndikwanise kurodha pasi mabhuku zviite kubva kubookpdfgratismundo.xyz ivo vakagadziridza ebook
Pindura kuna Luis Diego
Amazon inokutengera eReader yako yekare
BookBook, inonakidza bhuku-rakaumbwa kesi yeedu iPad Mhepo